Venezoela: Nodimandry i Hugo Chávez · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2013 22:57 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, bahasa Indonesia, Ελληνικά, 简体中文, 繁體中文, عربي, Italiano, Català, Deutsch, 日本語, polski, Magyar, বাংলা, русский, Español
Io hariva io (05/03/2013), no nambaran'i Nicolás Maduro, filoha lefitra, ny fodiamandrin'ny filohan'i Venezoela, Hugo Chávez Frías.
Nararin'ny homamiadana efa hatramin'ny 2010 ny Filoha Chávez ary efa nanaraka fitsaboana samihafa tany Kiobà efa ho in-4 raha kely indrindra. Taorian'ny nandreseny tamin'ny fifidianana tamin'ny 7 Oktobra 2012, izay niantoka indray ny fotoam-piasàny manomboka ny 2013 hatramin'ny 2019, nambarany tamin'ny Desambra fa mila miverina any Kiobà izyn hiatrika fandidiana iray hafa. 80 andro mahery taty aoriana, ka tao anatin'izany izy tsy niseho vahoaka mihitsy, niharatsy ny toe-pahasalamany vokatry ny fahasarotana tany amin'ny taovam-pisefoany sy ny fihazakazaky ny homamiadana.
Avy hatrany dia naneho hevitra tamin'ilay fanambaràn'i Maduro ireo mpampiasa Twitter.
@marujatarre [es] manoratra hoe:
@marujatarre: Maty ny lehilahy ary manomboka ny tantarany, tsy azo ihodivirana izany.
Hugo Chávez Frías, sary avy amin'i Bernardo Londoy ampiasàna ny lisansa Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)
Mardi (@mardicienta) [es] maneho fisaorana an'i Chávez:
@mardicienta: Tsy ho ampy mihitsy ny fisaorako anao amin'ireo rehetra nataonao ho anay, ry kamaradiko. Hamelana mandrakizay eto amin'ity Revolisionan'ny fitiavana ity anie ny voa nafafinao!
Raha i @LaDivinaDiva [es] kosa manambara hoe :
@LaDivinaDiva: ary aoka isika hanantena fa takatsika rehetra hoe fotoana izao hanadinoana ireo fifandonana tsy misy ilàna azy sady hiezaka isika hamaha ny fifandirantsika ao anaty fandriampahalemana sy firindràn'ny fiaraha-monina
Nitondra an'i Venezoela nanomboka ny 1999 hatramin'ny 2013 i Hugo Chávez. In-4 nandresy taminà fifidianana ho filoham-pirenena izy ary nandrafitra Lalam-panorenana vaovao. Fantatra manerana izao tontolo izao ny fomba fitantanany amin'ny fotokevitra manohitra ny imperialista izay nanakiana be an'i Etazonia, na dia nitoetra hatrany ho mpamatsy solika an'i Etazonia aza ny fireneny.
Nitondra sosokevitra maro samihafa ihany koa izy mikasika ny resaka fifanatonan'ireo any amin'ny faritra Amerika LAtina sy Karaiba. Tao an-tanindrazany, nanokana betsaka ny politikany mitodika amin'ny vahoaka ho any amin'ireo saranga faran'izay mahantra eo amin'ny fireneny izy, tamin'ny alalan'ny fampiasam-bola ho an'ny sosialy vatsian'ny volabe azo avy amin'ny famarotana solika nandritra ireo taona nitondràny.
Ao Venezoela, tsy azo ialàna ny resaka mikasika ny fisianà tendro ara-politika roa mifanohitra izay nampizarazara ny Venezoeliana, eo amin'ireo mpomba sy mpanohitra an'i Chavez nandritra ireny taona maro ireny, mahatonga ny fanakàrana ireo zava-mitranga ho sarotra takarina kokoa noho ny fisian'ny fomba fijery roa tsy mitovy. Na eo aza io, ny fodiamandrin'ny Filoha dia fotoana iray ho fisaonam-pirenena.
Soratra miverina: Manadihady ny Lova Politika Navelan’i Chávez ny Arzantiniana · Global Voices teny Malagasy
[…] ny fahafatesan'ny [mg] filoha Venezoelana Hugo Chávez, dia nanambara telo andro fisaonam-pirenena ny filohan'i […]
09 Marsa 2013, 13:46